Réseau Malina 01 Martsa 2019 6983 vues
Ity lahatsoratra ity dia faharoa amin’ny natokana ho an’ny orinasa Kraoma S.A
Nosoratan'i Tahiry RABENASOLO
Ilay hadinon’ny gazety
Ny 8 aogositra 2018, ny orinasam-panjakana Kraomita Malagasy S.A, na KRAOMA S.A, dia nanao Sonia fiaraha-miombona antoka ara-drafitra amin’ilay orinasa rosiana Ferrum Mining LLC, dia nakambana ireo orinasa roa ireo ho KRAOMA MINING S.A. Tao amin’ny lahatsoratra voalohany amin’ity andiany ity, sy ny filazan’ny gazety azy taorian’io, ny noresahina dia ny fepetra mifehy io fiaraha-miombona antoka stratejika io, ny fifanarahana hitrandraka mandritra ny fotoana voafetra vita Sonia ny 12 septambra 2018 nifanaovan’ny KRAOMA S.A sy ny KRAOMA MINING S.A., ary ny fihetsiky ny mpandray anjara manoloana io fiaraha-miombona antoka malagasy sy rosiana io, indrindra ny an’ny mpiasan’ny KRAOMA S.A. izay nampitsahatra ny fitokonana nataony nanomboka ny faran’ny volana novambra 2018. Ny fifandraisan’io fiaraha-miombona antoka io sy ny ahiahy ny amin’ny mety ho fanohanan’i Rosia ny fampielezan-kevitry ny filoha taloha RAJAONARIMAMPIANINA mba hahalany azy dia voaresaky ny gazety teto an-toerana koa ny volana marsa 2018.
Nefa, na ny orinasa Ferrum Mining aza tsy dia nanaitra firy ny mpilaza vaovao. Misy fanontaniana be dia be mikasika an’io orinasa io mitaky valiny raha tiana ny handanjalanja tsy miangatra ny mety hampahomby na mety ho loza ho an’ ny KRAOMA S.A sy ny Fanjakana malagasy ny fiarahany miombona antoka amin’ny Ferrum Mining. Iza no mitantana an’io orinasa rosiana io? Iza no tompony? Nahoana no izy no nofidian’ny KRAOMA S.A ho mpiara-miombona antoka aminy, nefa tsy nandalo tolo-barotra akory? Moa ve ny lazan’i Ferrum Mining sy ny zava-bitany tany aloha no azo anazavana izany? Sa kosa nisy resaka fifankahazoana ara-politika, na tena kolikoly fotsiny izao? I Ferrum Mining ve mikambana amin’ny orinasa Stork International Gmbh, mpanjifan’i KRAOMA voalohany indrindra taloha, nefa lasa manana trosa mavesatra dia mavesatra aminy ankehitriny?
Fivoarana ohatra ny tselatra?
Ny tranokalam-pifandraisan’ny Ferrum Mining dia mampahafantatra ny maha lohalaharana azy eo amin’ny sehatry ny indostrian’ny harena an-kibon’ny tany aty amin’ny faritr’i Afrika. Voalaza ao fa i Ferrum Mining dia manana “ny fahazoan-dalana rehetra ilaina ary miasa eny an-toerana aty Madagasikara” ankoatra ny maha eo amin’ny dingana fizahana ny toetany azy ao amin’ny sehatry ny “fampandrosoana ny tetikasa azo antoka any Zimbabwe, any Sodan ary any amin’ny firenen-kafa any”.
Ny vaovao nampahafantarina ny olona tamin’ny alalan’ny sampan-draharahan’ny hetra ikambanana any amin’ny Federasionan’i Rosia dia milaza zavatra hafa mihitsy. I Ferrum Mining dia tsy voasoratra tao amin’ny rejistra raha tsy ny novambra 2017, ary Petroneft no anarana nentiny tamin’izany. I ZHEZHEROVA Alena Vladimirovna (ou ЖЕЖЕРОВА АЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА amin’ny alfabeta syrilika) no nanorina azy ary manana renivola 10 000 robla (izany hoe 520 000 ariary, eo ho eo). Araka ny rejistra, Rtoa ZHEZHEROVA dia tompon’ny 100%-n’ny petrabolan’i Ferrum Mining ary iz y irery koa no mpiasa ao. Saingy, ankehitriny ny orinasa dia mampiasa teratany rosiana sivy fara fahakeliny, naparitaka eto Madagasikara tamin’ny septambra 2018. Vaovao mahaliana hafa, ny trano misy ny foiben’ny orinasa any Saint-Petersburg, Blagodatnaya st. 63, bld. 1A, office 23 dia ifampizarany amin’ny orinasa 17 hafa. Orinasa madinika manan-kambo lehibe sa orinasa lehibe tsy te hanintona ny maso? Na izany na tsy izany, mampanontany tena ny fomba nampalaza an’i Ferrum Mining tao anatin’ny sivy volana fotsiny nisiany ary nahazoany fahaiza-manao ampy nandresen-dahatra ny mpitantana ny KRAOMA S.A ka naneken-dry zareo fiaraha-miombona antoka mavesa-danja be toy io tsy nandalo tolo-barotra akory.
Foiben’ny orinasa Ferrum mining any Saint-Petersburg (Google map)
Zavatra hafahafa vitsivitsy
Ny fahombiazan’i Ferrum Mining amin’ny fanatontosana tetikasa lehibe hafa eo amin’ny sehatry ny fitrandrahana kraoma na minerais hafa eto Madagasikara na any amin’ny tany hafa, dia mety hanamarina ny naha haingana dia haingana ny fanapahan-kevitra hanaovana an’io fiaraha-miombona antoka io. Nefa tsy afaka mba nahita asa vitsivitsy akory vitan’i Ferrum Mining tany aloha tany izahay, ary tsy misy azo ahalalana mihitsy koa raha tena misy tetikasan’io orinasa io marina any Sodan na any Zimbabwe. Tsara marihina, ny asa mifandraika amin’ny fitrandrahana harena ambanin’ny tany dia any amin’ny laharana faha 17 vao mipoitra amin’ny asa lazain’i Ferrum Mining fa sahaniny, manaraka avy hatrany ny haza sy ny famandrihana bibidia.
Mifanohitra amin’ny zava-boalazan’ny tranonkalam-pifandraisan’i Ferrum Mining, io orinasa io dia tsy manana fahazoan-dalana akory na iray aza mba hitrandrahana harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara. Ny rejistry ny Biraon’ny Kadasitry ny Harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara (BCMM) hita ao amin’ny tranokalam-pifandraisany dia tsy ahitana fanomezan-dalana azy na iray aza. Ho an’Atoa MBOINY Simon Seva, tale jeneralin’ny KRAOMA MINIG S.A., nanontanina fony nanoratana ilay lahatsoratra voalohany tamin’ity andiany natokana ho an’ny KRAOMA S.A ity ny Ferrum Mining dia tsy nanao afa-tsy nanampy ara-bola ny KRAOMA S.A tamin’ny alalan’ny fanakambanana azy tamin’ny KRAOMA MINING S.A ka izany no tsy ananany fahazoan-dalana.
Rtoa ZHEZHEROVA : anarana nindramina ?
Misy antsipirian-javatra mampiahiahy momba ny tena asa marina sahan’ny Tale jeneraly sady hany tokana tompon’i Ferrum Mining. Araka ny hevitry ny fikambanana mpiara-miasa amin’ny tambajotra MALINA manam-pahaizana manokana amin’ny fanadihadiana an-gazety ary havanana amin’ny toe-draharaha rosiana dia tsy ahitana taratra velively an-dRtoa ZHEZHEROVA na any amin’ny tahirim-pamantarana fototra azo antoka na any amin’ny tranonkalam-pifandraisana.
Zavatra hafa mahavariana, Rtoa ZHEZHEROVA dia tsy voaresaka velively na aiza na aiza any amin’ny tahirin-kevitra momba ny fiaraha-miombona antoka mba nety ho azonay. Izany OSIPOV Evgeny izany no nanao sonia tamin’ny anaran’i Ferrum Mining ny fifanarahana nanaovana ny fiaraha-miombona antoka teo aminy sy ny KRAOMA S.A. Marihina fa Atoa OSIPOV koa dia Filohan’ny Filankevi-pitantanan’ny orinasa mikambana KRAOMA MINING S.A ary noho io toerana misy azy io no nanaovany sonia ny fifanarahana hitrandraka mandritra ny fotoana voafetra eo aminy sy ny KRAOMA S.A Na dia mahazatra aza ny mahita famindram-pahefana lehibe any amin’ny orinasa misahana tetikasa maro, mba hafahafa ihany kosa raha tetikasa lehibe voalohany ataon’ny orinasa Ferrum Mining eto Madagasikara dia tsy hita na aiza na aiza ny anaran’ny tale mpanatontosa sy mpanorina azy.
Rariny loatra noho izany raha ahiana ho anarana nindramina fotsiny ho an’i Ferrum Mining ilay hoe Rtoa ZHEZHEROVA fa tsy izy velively no tena mpanorina azy.
Orinasa hafa mitovitovy endrika
Izany fehin-kevitra izany dia hamarinin’ny fisian’ny orinasa roa hafa, Pion LLC sy Transcom LLC, izay toa hoe naorina sy tantanan-dRtoa ZHEZHEROVA ihany koa. Ireo orinasa roa ireo dia mitovitovy endrika amin’i Ferrum Mining, araka ny rejistra ofisialy. Samy naorina tany Saint-Pétersbourg izy ireo, manana renivola 10.000 robla avy, ary Rtoa ZHEZHEROVA no hany tokana tompon’ny renivola sy mpiasa ao.
Ny toerana misy ny foibeara-tsosialin’izy ireo koa dia misy itovizany mahavariana amin’ny endriky ny foibe ara-tsosialin’i Ferrum Mining. Indrindra ny an’i Transcom LLC, izay mikambana adiresy amin’ orinasa fito hafa, ao amin’ny trano fonenana efa tranainy be.
I Pion LLC amin’izao fotoana izao dia efa rava, fa i Transcom LLC dia mbola miasa foana any amin’ny fivarotana hazo sy ny fitaovana fanaovan-trano. Matevintevina mihitsy ny vola miditra aminy isan-taona satria tafakatra hatrany amin’ny 1 tapitrisa dolara amerikana, na izany aza anefa izy dia somary mihafihafy foana. Tsy ahitana taratra an’io orinasa io velively any amin’ny aterineto taorian’ny fanadihadianay.
Tsy fisian’ny tolo-barotra mampiahiahy
Raha nisy ny fandalovana tamin’ny tolo-barotra dia ho nahazoam-baliny ny fanontaniana nipetraka momba ny Ferrum Mining. Ny Didy lah. 2006-346 mantsy dia mitaky amin’izay rehetra mamaly tolo-barotra ny hanomezany ny vaovao rehetra ahafahana mahalala azy, miaraka amin’ny famaritana ny fahefany araka asa, ara-teknika ary ara-bola.
Koa nahoana àry no tsy nisy tolo-barotra na iray aza? Tsiahivina fa, araka ny tenin’ny Tale Jeneralin’ny KRAOMA MINING S.A. io toe-javatra io dia azo hazavaina amin’ny hoe tsy nanao afa-tsy nitondra vola i Ferrum Mining mba ho fitambarany tamin’ny KRAOMA S.A. Hadinony angaha ireo fahazoan-dalana hitrandraka telo nafindra avy amin’i KRAOMA S.A nankany amin’i KRAOMA MINING sy ireo mpiasa sivin’ny Ferrum Mining tonga eto Madagasikara mba hanampy ara-teknika ny mpiasan’ny KRAOMA S.A? Ary na dia hoe mpampiasa vola tsotra fotsiny aza ny Ferrum Mining dia tokony ho nanaovana tombana mahaleo tena ny fananan’ny KRAOMA S.A izay nafindra tany amin’ny fanatambarana ireo orinasa. Izany rahateo no nohamafisin’ny Ministeran’ny fitantanambola sy ny toebola tamin’ny taratasy tamin’ny 23 oktobra 2018 nalefany ho an’ny Fitantanana ny KRAOMA S.A. Tsy maintsy atao ny tombana toy izany alohan’ny hanomezana na hamindrana fananana, araka ny andininy 423 amin’ny Lalàna lah.2003-036 mifehy ny orinasa ara-barotra. Tsara homarihina eto fa ny Ministeran’ny fitantanambola sy ny toebola koa dia tompon’andraikitra ara-dalàna amin’ny fitantanana ny anjaram-petrabolan’ny fanjakana any amin’ny orinasa ara-barotra (97,17% raha ny ao amin’ny KRAOMA S.A).
Dia manontany tena ianao : nahoana no tsy nasiana tolo-barotra? Nomen’ny fitondrana HVM tombondahiny manokana ve ny rosiana? Kolikoly natao ho an’ny filoha teo aloha sy ny mpitantana ny KRAOMA ve? Ary ahoana ny momba ny fifandraisan’ny Ferrum Mining amin’ny orinasa Stork?
Fanta-bahoaka fa ny Filoha teo aloha RAJAONARIMAMPIANINA dia nifamatotra akaiky dia akaiky tamin’ny Federasionan’i Rosia tamin’ny faramparan’ny fotoana naha filoha azy. Nitsidika an’i Moscou izy ny volana martsa 2018 niaraka tamin-Dramanantsoa Benjamin Ramarcel, izay ho lasa filohan’ny Filankevi-Pitantanan’ny KRAOMA S.A taty aoriana, ary ZAFILAHY Ying Vah, ministry ny Harena ankibon’ny tany sy ny indositrian’ny solika tamin’izany ary lasa Masoivohon’i Madagasikara any Rosia tamin’ny septambra 2018. Nandritra io fitsidihana nataony io, RAJAONARIMAMPIANINA Hery dia notolorana ny doktoràm-boninahitra avy amin’ny Oniversiten’ny fifankatiavan’ny vahoaka, ao Mosko, sekoly ambony nahazoan’Atoa MBOINY ny diplaomany, izy no filoha mpanorina ny fikambanan’ny mpianatra malagasy taloha tany URSS sy tany Rosia. Roa volana taty aoriana, tamin’ny mey 2018, dia nisy fifanarahana fiaraha-miasa nosoniavina teo amin’io ministry ny Indostrian’ny harena an-kibon’ny tany sy ny solika io ary ny Tale Jeneralin’ny Zarubezhgeologiya JSC, orinasan’ny ISC ROSGEO izay orinasam-panjakana fampiasan’ny Federasionan’i Rosia vola. Io fifanarahana io dia milaza fa hisy ” fiaraha-miasa lavitra ezaka ataon’ny roa tonta eo amin’ny sehatry ny fandinihana ara-jeolojika, ny fanombanana ny harena an-kibon’ny tany, ny fitadiavana sy fizahana ny toerana misy mineraly eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’ Madagasikara”. Ary farany, nandritra ny naha filoha an’i Hery RAJAONARIMAMPIANINA, i Madagasikara dia nanao sonia fifanarahana fiaraha-miasa ara-tafika nifanaovana tamin’ny Federasionan’i Rosia ary nisy fandinihana vinavinam-piaraha-miasa teo amin’ny firenena roa tonta ho an’ny fanavaozana ny seranan-tsambon’i Toamasina.
Marihina koa fa ny filohan’ny Filankevi-pitantanan’ny KRAOMA roa farany, izany hoe RANDRASANA Eric Jean Noël sy RAMANANTSOA Benjamin Ramarcel, dia sady nitazona an’io toerana io no samy talen’ny kabinetra sivilin’ny Filoha ihany koa.
Momba ny orinasa Stork kosa, raha jerena ny trosa be ananany amin’ny KRAOMA S.A, dia betsaka ny antony tsy maintsy hampirisihana an’io fiaraha-miasa io na ny hivarotana tsotra fotsiny izao ilay orinasam-panjakana amina orinasa rosiana. Tsiahivina mantsy fa araka ny tenin’ny Tale Jeneralin’ny KRAOMA MINING S.A, sy ny solontenan’i Stork teto Madagasikara taloha, MBOINY Simon Seva, ny orinasa Stork dia efa nanome vola mialoha mitentina 6 tapitrisa dolara amerikana hividianana mineraly tamin’ny KRAOMA S.A; fifanekena izay toa hoe tsy voahajan’ny KRAOMA S.A.
Misy fifandraisany hentitra ve eo amin’ny Stork sy Ferrum Mining? Atoa MBOINY dia milaza fa tsy fantany, fa i Stork dia manana birao any Mosko. Misy kompania iray, any amin’ny faritra rosianan’i Sverdlovsk, ao anatin’ny Vondrona Stork. Etsy an-daniny, RAGHAV Jugendra Singh,Tale Jeneralin’ny Vondrona Stork, raha ny filazan’ny New York Times, dia mpitsikilon’ny KGB namita fianarana tany Rosia taloha. Nandritra izany fotoana nianarany izany izy no nifampikasokasoka tamin’Atoa MBOINY sy Atoa ZAFILAHY, ministry ny harena an-kibon’ny tany sy ny indostrian’ny solika taloha ary masoivohon’i Madagasikara tany Rosia nandritra ny fitondrana RAJAONARIMAMPIANINA, raha ny voalazan’ny lahatsoratra iray navoakan’ny media Africa Intelligence.
Na dia mbola tsy azo atao aza amin’izao fotoana izao ny hilaza fa mitombina ny iray na izy rehetra amin’ireo eritreritra ireo, ny marina momba ny nahatonga an’ io fiaraha-miombona antoka maizimaizina io teo amin’ny oirinasa KRAOMA S.A sy ny Ferrum Mining kosa dia tsy maintsy ho fantatry ny rehetra aoriana kely ao. Ny ministra vaovao miandraikitra ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika amin’ny fitondrana RAJOELINA, Atoa RAVOKATRA Fidiniavo, sy ny Tale Jeneralin’ny KRAOMA S.A vao avy notendrena, Atoa RAKOTOMANANTSOA Nirina,dia namerimberina foana tao anatin’ny herinadro vitsivitsy izay fa hampanao fitiliana akaiky ny fandehan-draharaha tao amin’ny KRAOMA S.A ary koa fanombanana mahaleo tena ny fananan’io orinasam-panjakana io.
Antenaina fa hatao daholo izay mety rehetra hamerenana amin’ny KRAOMA S.A ilay sata maha sangany azy amin’ny Indostrian’ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara ary tsy hanaiky raha tsy atolotra ny manam-pahefana momba izany ireo tompon’andraikitra nahabotry azy.